[MMAnime] Combatants Will Be Dispatched! : Sentouin, Hakenshimasu!
ဒီကားလေးကတော့ Isekaiဆိုတာနဲ့ လူတိုင်းပြေးမြင်ကြတဲ့ Konosubaကိုရေးတဲ့ authorရဲ့လက်ရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မြေအောက် ဒုစရိုက်အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Kisaragi ကော်ပိုရေးရှင်းဟာကမ္ဘာကြီးကို အုပ်စိုးနိုင်လုနီးနီးအခြေအနေမှာ အခြားဂြိုလ်တစ်လုံးကို သိမ်းပိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုကမ္ဘာအား သွားထောက်လှမ်းဖို့ အံစာတုံးခလောက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ တိုက်ပွဲ၀င်အေးဂျင့် Six ဟာKisaragi Alice ဆိုတဲ့ စက်ရုပ် loli မ‌လေးနဲ့အတူ ရန်သူ့ဂြိုလ်သို့ စေလွှတ်ခြင်း ခံရပါတော့တယ်။အဲ့ဆီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့... ဘာတွေဆက်ဖြစ်မယ်၊ Demon Lords Army ဆိုတဲ့ ရန်သူ့အဖွဲ့အစည်းကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်မယ်ဆိုတာကိုတော့.... ကျွန်တော်တို့ Cafe နဲ့ Delta Anime And Manga Myanmar တို့အတူပူးပေါင်းပြီးတင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ဒီကားကလည်း Konosuba authorရဲ့လက်ရာဆိုတော့ ကျိန်းသေခွီးနေရမှာပါ။